Gabi ahaan ab waxaa la soo gabagabeeyay ololihii doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Musharaxiintiina waxay galeen gudaha. | ogaden24
Gabi ahaan ab waxaa la soo gabagabeeyay ololihii doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Musharaxiintiina waxay galeen gudaha.
Apr 29, 2018 - Aragtiyood
Ololihii ugu dambeeyay ayaa ka socda magaalada Muqdisho, kaasoo ay wadaan Musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, waxaana tan iyo xalay Hotelada Muqdisho ka socday kulamo aan loo kala kicin.
Ololaha ugu xoogga badan ayaa dhici doona caawa, waxaana magaalada ay noqon doonta mid aan laga seexan, marka loo eego sida Musharax walba iyo kooxdiisa ololaha ay dadaal ugu geli doonaan taageerada Xildhibaanada, si ay codkooda u helaan.
Musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo gaaraya 11 Musharax ayaa halgan iyo olole badan waday labadii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo la sheegayo in Musharaxiinta ay ku kala xoog badan yihiin Ololaha socda,
Illaa iyo hada Musharaxiinta ugu cad cad ayaa waxaa ka mid ah Ibraahim Isaaq Yarow, C/casiis Lafta Gareen, Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, Shariif Maxamed Cabdalla, Maxamuud Macalin Yaxye, Xaaji Cali iyo kuwa kale.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xukuumadda iyo Madaxtooyada ay wataan hal musharax ah, inkastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan Musharaxa ay sida toos u taageerayaan, waxaana hadal heyntu tahay Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Waxaa aad u yar saadaasha cida noqon doonta Guddoomiyaha xiga ee Golaha Shacabka, marka loo eego heerarka Musharaxiinta iyo awoodahooda oo ah kuwo isla siman, waxaana saacad walba la filan karaan in wax is bedelaan oo Musharax aan la fileyn uu guuleysto.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in Musharax kasta oo Madaxtooyadda iyo Xukuumadda wataan uu la kulmi doono culeys, isla markaana la isugu wada tagi doono ama loo midoobi doono, marka loo eego taariikho horay u dhacay oo Musharaxiin dowladda wadatay oo gabagabadii Tartanka lagu qaaday Washamsi.